Mupata wemhumhi, kutanga chikamu cheshongwe Makoronike tetralogy | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Fantasy, Mabhuku, Novela
Mupata weMapere (1999) raive rechipiri rakaburitswa bhuku nemunyori wechiSpanish Laura Gallego García. Zita racho rakava chikamu chekutanga che tetralogy Tower zvinyorwa. Mamwe mabhuku ari munhevedzano ari Kutuka kwatenzi, Kufona kwevakafa y Fenris elf. Iyo yekupedzisira inorondedzera zviitiko pamberi pekutanga kwesaga rese pachayo (prequel).
Kuburitswa kwekutanga kwaGallego, kuguma kwenyika, zvaireva kurota kwekunyora kwekutanga (Barco de Vapor Mubairo kubva kuWedhiyo SM). Zvimwe, Mupata weMapere Iyo yaimiririra kupinda mune dhizaini mukati meiyo genre yefantasy. Muchokwadi, nhasi munyori weValencian anoonekwa sechiyero chekuverenga kwevana uye fungidziro yevechidiki zvinyorwa muSpanish. Usati waenderera mberi nekuverenga, zvinoonekwa kuti kuchave vaparadzi.
1 Munyori, Laura Gallego García
1.1 Mhando uye chimiro
1.3 Mamwe emakhedzisiro akakurisa uye kuzivikanwa kwebasa rake
2 Kuongorora kweVall of the Wolves
2.1 Maumbirwo uye mamiriro
3.3 Fenris naMaritta
4.1 Shamwari yekufungidzira
4.3 Iyo Unicorn
4.4 Zvinangwa zvaTenzi
4.6 Kuratidzira kwekupedzisira
Munyori, Laura Gallego García
Akazvarwa muCuart de Poblet, Valencia, muna Gumiguru 11, 1977. Akawana basa rake rekunyora achiri kuyaruka, kubvira ipapo asina kubudirira kutumira mabhuku anodarika gumi nemaviri kuvaparidzi vakasiyana. Kunyange zvakadaro, kushingirira kwake kwakabhadharwa mu1998, pakaburitswa boka reSM kuguma kwenyika. Zvichakadaro, akawana doctorate muSpanish Philology kuYunivhesiti yeValencia.
Mhando uye chimiro
Kwemakumi maviri emakore emabasa ekunyora, Gallego akabata mumhando dzakasiyana. Yakatanga nenhoroondo-yekufungidzira novel (kuguma kwenyika). Ipapo akaedza nesainzi fungidziro (Vanasikana vaTara, 2002) uye epic fungidziro (ine trilogy Ndangariro dzaIdhun, 2004-2006). Zvakare kucherechedzwa mazita ake mazhinji ezvinyorwa zvevana.
Iye munyori weSpanish akaburitsawo chaiwo mabhuku ezvinyorwa neakateedzana Sara nevanotora zvibodzwa . Iyo saga inorumbidzwa zvikuru nemaitiro ayo ezve nyaya senge kuenzana kwevakadzi, rusaruro uye mutambo wemitambo. Parizvino, Laura Gallego akaburitsa mabhuku makumi mana nemasere.
Mune ese marudzi ataurwa, munyori weValencian anowanzo kupa kukosha kune iyo Amor. Saizvozvowo, rondedzero tambo uye zvinokurudzira zvevatambi zvinodzorwa nemanzwiro, hunyengeri uye chigumbu. Ndokunge, kuzvipembedza kwekuzviisa pasi (kwevatsigiri) kazhinji kunotungamira pane zvinangwa sekuremekedza, kururamisira kana basa.
Mamwe emakhedzisiro akakurisa uye kuzivikanwa kwebasa rake
El Barco de Vapor Yevacheche Literature Mubairo 2002, ye Nhoroondo yeMambo Anodzungaira.
Cervantes Chico Mubairo (2011).
Mubairo weNyika weVana neVechidiki Zvinyorwa zve2012. Izvi, zvebhuku rake Iko kuimba miti.
Imaginamalgama Award 2013, ye Bhuku remasuo.
Kelvin 505 Mubairo 2016.
Analysis of El Mupata de ari mbiru
Unogona kutenga bhuku pano: Mupata weMapere
Maumbirwo uye mamiriro
Iyo novel ine 14 zvitsauko uye epilogue. Saizvozvo, iyo nyaya iri mune imwe nguva pamberi pezvino, nekuti mabhiza ndiyo nzira huru yekufambisa. Kungofanana nemabasa ezuva nezuva munharaunda yekumaruwa inoitwa pasina michina. Iye murondedzeri (anoziva zvese) anotsanangura nyika yekufungidzira, yakavakirwa mungano, uko mashiripiti, zvitsinga uye zvisikwa zvinofadza zviri chaizvo.
Munyori wechitatu-munhu anoshandisa mutauro wakagadzirwa, akangwarira uye, panguva imwechete, ari nyore. Izvo zvakakosha kuti uwane kuzadzikiswa kuzere kwemashoko pasina kukanganisa kana kuwedzeredza muverengi neruzivo rusina basa. Nenzira imwecheteyo, iwo mavara anowanda mune nhaurirano zvakasikwa dzakapindirwa nemamiriro ekufungidzira izvo zvinotungamira mukuverenga kunonakidza uye kwemvura.
Iye munyori anotsanangura zviitiko nenzira ine chinangwa, kunyangwe ari ekuzviisa pasi. Haisi chinhu chidiki, nekuti munoverengeka makakatanwa akasiyana anomuka anoshanda kuti anzwisise zvirinani hunhu nemanzwiro e protagonist, Dana. Anowira zvisina tariro murudo naKai, uyo, zvekare, mweya.
Asi Kai paanofanira kudzokera kuguva, anofunga kumirira kusvika parufu rwake kuti akwanise kusangana naye zvakare. Rimwe dambudziko riri pachena kune protagonist kusavimba kwake mune zvese zvinomukomberedza uye nenyaya dzemashiripiti. Nekudaro, Dana ari kujekesa kusazivikanwa kwake kuburikidza nekutaurirana nevamwe vatambi vari murungano.
Ndiye mutambi mukuru. Iye musikana mudiki ane bvudzi dema ane maziso ebhuruu ane chimiro chakadzama kwazvo, akashinga hunhu uye anofarira kudzidza zvakawanda. Saizvozvowo, iye ari mukuda kwekutevera mirawo yenzvimbo imwe neimwe ... kunze kwekunge ichipesana nezvido zvemwoyo wake.
Ndiyo co-nyeredzi hunhu. Anoonekwa pakutanga saDana "shamwari yekufungidzira", asi pachokwadi iye mweya une chimiro mukomana mutsvuku ane maziso akapenya, akanaka kwazvo. Adventurous mune hunhu, anogara achida kubatana zvisingaite neavo vaanokoshesa.
Fenris ane runako ane makore mazana maviri-elf (mudiki wekuverenga nguva yemarudzi ake). Chinhu chayo chikuru kwazvo kushanduka kuita mhumhi panguva yemwedzi wemwedzi. Kune rimwe divi, Maritta ndiye mushongwe wekubika mushongwe, ane shungu uye anofungira mashiripiti. Ipo ichizobatsira Dana kana achichida.
Ndiye murume murefu, akasviba; iyo tenzi tenzi, chivakwa chakareba kwazvo chakazara nemakamuri asingagarike uye raibhurari hombe. Zvakare, mudzidzisi ane simba kwazvo, ane hudyire uye mukana mukana. Muchokwadi, chimwe chezvinhu zvakakosha zveiyo nyaya ndechekuti Tenzi akauraya iye wega governess, Aonia (aimbova mutongi weshongwe).
Nyamukuta vakaona chimwe chinhu chinoshamisa pamusoro paDana achangoberekwa, asi haana waakaudza. Vabereki vake nevanin'ina vake vakamubata nenzira yakajairika, asi vese vakaona kuti aive akasiyana, akanyarara uye akangwarira. Paaive nemakore matanhatu, akasangana naKai, uyo akatanga kumubatsira nemabasa ake ezuva nezuva. papurazi kwenguva yakawanda yekutamba.
Mushure memakore maviri ezvakafanana "zvakajairwa", rimwe zuva akarasikirwa nenguva yekudya, saka, akadzvinyirirwa zvakanyanya nevabereki vake. Akakakavadzana kuti airidza naKai, asi vakoma vake vakamuudza kuti Kai haapo. Mushure memazuva mashoma, vamwe vana mumusha vakamukoka kuti azotamba kungomunyadzisa nekuti aitaura ega uye achimuti "muroyi."
Kai akanzwa kushungurudzika kukuru nekuti akanzwa chikonzero chemamiriro ezvinhu akasangana naDana. Naizvozvo, akazeza kugara neshamwari yake, asi iye akamukumbira kuti agare nekusingaperi. Zvisinei, paive nemurume akapfeka jena aigona kuona Kai, uyu hunhu - Tenzi - akabvunza mhuri yaDana mvumo yekumuendesa kune imwe nzvimbo (shongwe). Zvakashamisa Dana kuti chikumbiro ichi chakagamuchirwa.
Iyo shongwe iri pachokwadi chikoro chemashiripiti chiri mumupata wemhumhi, (yakatumidzwa zvakadaro nekuda kwezvikara zvisingafi zvinozvifambisa usiku) Mune shongwe, Dana anosangana naFenris, elf, naMaritta, mubiki wepfupi. Gare gare, Dana anonzwisisa kuti iye ndi "Kin-shannay", mhando yemunhu anokwanisa kutaura nevakafa.
Dana anotanga kudzidza zvemashiripiti. Panguva iyoyo, mukadzi asinganzwisisike akapfeka nguvo dzegoridhe anonzi Aonia (aimbova mambokadzi weshongwe) anotanga kuonekera kwaari kazhinji. Huvepo hunoshamisa hunomuudza ngano yeunicorn (inoonekwa chete panguva yakazara yemwedzi husiku) uye inomubvunza kuti vasangane naye mumupata wemhumhi.
Zvino, pahusiku hwakazara hwemwedzi Dana naKai vanokwanisa kuona iyo nyoni, asi mapere emupata (anodzivirira chero chiperengo) anovadzivirira kumutevera. Zvakare, imbwa dzakapotsa dzauraya Dana, dzakaponeswa mukunyanyisa naFenris. Mushure megore, Dana anoyeuka shanduko yaFenris kuva mhumhi, nekuda kwekuti aikwanisa kudzora mhuka.
Mukuedza kwechipiri, achiperekedzwa naFenris, Dana anokwanisa kutevera iyo nyati kukamuri uko kune tsime rine pfuma. Izvo, inowedzera simba remashiripiti kune chero ani anayo. Pakarepo, Iye Master (uyo aivatevera) anoonekwa uye anokanda Dana, Fenris, Maritta naKai mugomba dema. nekusingaperi, sezvaanokanda huroyi kuti atore mashiripiti eunicorn.
Kubva mukati megomba risingaperi Dana anotumira Aonia kudzokera kunzvimbo yepasi (achishandisa muviri waMaritta). Iye muroyi anoedza zvisina basa kubata Tenzi, asi anotapa Fenris uye anokwira kumusoro kushongwe. Tevere, apo Dana, Kai, naAonia pavanoedza kutevera Tenzi, iye tenzi anopumha huroyi hunobata Kai mukati mehombodo.
Tenzi anopa kusunungura Kai mukutsinhana nekutendeka kwaDana uye husingaperi husungwa. Iye anobvuma uye akapasa bvunzo yeacid (izvozvi ave mashiripiti, haasisiri mudzidzi). Nguva pfupi usati waisa chibvumirano naTenzi, Dana anourawa naAonia.
Dana anokwanisa kudzokera kunyika yevapenyu seKin-shannay. Paakadzokera kuTower, anosanganazve naFenris kusangana naTenzi zvakare. Mukupedzisira, uyo anokwanisa kupedzisa tenzi weshongwe ndiMaritta, uyo anomubaya kumusana. Kubva pazuva iro zvichienda mberi, Dana anova mutongi mutsva weshongwe.
Kunyangwe zvisiri zvinhu zvese zvine mutsindo kuna Dana, sezvo achifanira kupatsanuka kubva kuna Kai (uyo anofanirwa kudzokera kunyika yevakafa zvachose). Mune epilogue, mutongi weshongwe anofamba naFenris kupurazi remhuri yake kunotsvaga mabhonzo eshato rebhuruu. Chokwadi, zvidimbu zvepfupa zvinobva kune imwechete mhuka iyo yakauraya Kai mazana mashanu emakore apfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Fantasy » Mupata weMapere